झापामा यति धेरै दुर्घटना ! - Enepalese.com
झापामा यति धेरै दुर्घटना !
इनेप्लिज २०७२ कार्तिक २७ गते ११:२५ मा प्रकाशित
बिर्तामोड, २७ कात्तिक । कात्तिक २ गते– बिरिङ पुलमा भारतीय ट्याङ्करले नेपाली मोटरसाईकलले ठक्कर दियो । मोटरसाईकलमा सवार मेचीनगर नगरपालिका १० निवासी ३४ वर्षीया रेनुका गुरुङको मृत्यु भयो । सोही दिन कालिखोलामा बसले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाईकल चालक मोरङ पथरीका ३८ वर्षीय खेमप्रसाद बजगाईको ज्यान गयो ।
कात्तिक ५ गते– दमकमा मोटरसाईकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भयो । अन्दाजी ५०÷५२ वर्षकी ती महिला बाटो काट्दै गर्दा मोटरसाईकलले ठक्कर दिएको थियो । न ठक्कर दिने मोटरसाईकलको नम्बर नै खुल्न सक्यो, न त ज्यान गुमाउने महिलाको नाम नै ।
कात्तिक १५ गते धरमपुरमा यात्रुबाहक बसले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाईकल चालक पाँचथरका ४५ वर्षीय मणिकुमार राईको ज्यान गयो । मोटरसाईकलको पछाडि सवार ४० वर्षकी लक्ष्मी राईलाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म त पुर्याईयो, तर उनी पनि बाँच्न सकिनन् ।
कात्तिक १८ गते– लखनपुरमा बसले ट्रयाक्टरलाई हिर्कायो । दुर्घटनामा ट्रयाक्टरका सहचालक ३२ वर्षीय तेजेन्द्र गड्तौला रहेनन् ।
कात्तिक १९ गते– तोपगाछिमा पैदल हिँड्दै गरेकी ६० वर्षीया डम्बरकुमारी कार्कीलाई मोटरसाईकलले ठक्कर दियो । उनी पनि बाँच्न सकिनन् । सोही दिन इटाभट्टमा ट्रकले मोटरसाईकललाई ठक्कर दियो । मोटरसाईकल चालक बाहुनडाँगी निवासी ४० वर्षीय हिरालाल रसाईलीको ज्यान गयो ।
कात्तिक २० गते– कनकाई नगरपालिका ८ मा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको ट्रकले पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाईलकललाई ठक्कर दियो । ठक्करबाट उछिट्टिएको मोटरसाईकल फेरि बसमा गएर ठोक्कियो । मोटरसाईकलमा सवार कनकाई नगरपालिका ९ बस्ने ४० वर्षीय लक्ष्मी थापा र २८ वर्षीय केशव बोहोराको मृत्यु भयो ।
यी त कात्तिक १ गतेदेखि २० गतेसम्म भएका मुख्य मुख्य दुर्घटना मात्र हुन् । पछिल्ला २० दिनमा ९ वटा सडक दुर्घटना भएका छन् । १० जनाको मृत्यु भएको छ, ६ जना घाईते छन् । २० गतेसम्म भएका दुर्घटनामध्ये आधाजसो साँझमा भएका छन् ।
के गर्दैछ ट्राफिक ?
जबजब सडक दुर्घटना बढ्छ, त्यतिबेला ट्राफिक प्रहरीतर्फ प्रश्नहरु तेर्सिन थाल्छन् । झापामा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढेसँगै ट्राफिक प्रहरीको आलोचना सुरु भइसकेको छ । तर, ट्राफिक भने दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न अनेक उपाय लगाइरहेको छ ।
‘साँझमा दुर्घटना हुने क्रम बढेकाले साँझको समयमा ट्राफिक सक्रियता बढाएका छौँ,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रोशन आचार्यले भने । आचार्यका अनुसार चेतना र कारवाही गरी दुई तरिकाले ट्राफिक काम गर्दैछ । ट्राफिक प्रहरीले विद्यालय, सामाजिक विद्यालय, सामाजिक संघ संस्था र मजदुरहरुलाई सचेतना प्रदान गरिरहेको छ । सडक सङ्केत राख्ने, पूल पुनर्निमाणमा पहल गर्ने, जेब्राक्रसिङ राख्ने लगायतका काममा पनि ट्राफिक सक्रिय छ ।
‘अधिकांश दुर्घटना चालककै लापरवाहिका कारण भएको देखिन्छ,’ ट्राफिक प्रमुख आचार्य भन्छन, ‘जतिपनि दुर्घटना भएका छन्, ती सबै खुल्ला ठाउँमा भएका छन् ।’ तीब्र गति अर्को प्रमुख कारण भएको उनको बुझाई छ । ‘स्पिड कुदाउन बानी परेकाहरुले सबै गाडिलाई जित्नै खोज्छन,’ उनले भने, ‘ओभरटेक अर्को प्रमुख कारण हो ।’
त्यसो त गति मापन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग राडार गन (गति मापन यन्त्र) नभएको पनि होईन । तर, झापामा ट्राफिकसँग एउटा मात्र राडार गन छ । त्यो कहिले दमक पठाईन्छ, कहिले काँकरभिट्टा । ‘राडार गन देखाउने बित्तिकै गाडी स्लो गरिहाल्छन्,’ आचार्यले भने, ‘गाडी चालक पनि कम बाठा कहाँ छन् र ।’
कारवाही कस्तो ?
कात्तिक २० गतेसम्मको कारवाही तालिका हेर्ने हो भने ६२ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्वाल पारेको देखिन्छ । जसबाट ६२ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । सोही अवधिमा ८७ जना चालक मादक पदार्थ सेवन (मापसे)को कारवाहीमा परेका छन् । मापसेको कारवाहीमा महिलाहरु पनि उत्तिकै पर्ने गरेको ट्राफिक स्रोत बताउँछ ।